Madaxweynaha Puntland Deni oo la kulmay gabar fariin maanso ah u dirtey - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Puntland Deni oo la kulmay gabar fariin maanso ah u dirtey
Madaxweynaha Puntland Deni oo la kulmay gabar fariin maanso ah u dirtey
Madaxwaynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta madaxtooyada magaalada Boosaaso ku qaabilay Ayaan Xasan Ducaalle oo ah gabar 7sano jir ah oo araga naafo ka ah, taas oo maalmo ka hor fariin Maanso ah u dirtay Madaxwayne Deni.
Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa uu Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Puntland Maxamed Ceydiid, xubno ka mid ah Ganacsatada Puntland, Xaawo Jaamac Cabdi oo ka mid ah dadka araga naafada ka ah, una ololeysa dadka araga la’ iyo qoyska Ayaan.
Kulankan kadib ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxa lagu sheegay in Madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni uu u balanqaaday inuu ka caawin doono Ayaan Xasan Ducaalle in ay hesho Dhakhtar dibedda ah.
Sidoo kale Madaxweyne Deni ayaa sheegay in dowladdu wax ka qaban doonto Xaaladaha Nololeed iyo Waxbarasho ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee nool Puntland.
Ayaan Xasan Ducaalle oo ah gabadha naafada ah ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsantahay in Madaxweynaha uu qaabilay, waxayna ka mahadcelisay in madaxweynuhu uu wax ka qabanayo xaaladeeda caafimaad iyo guud ahaan nolosha dadka araga naafada ka ah.
Tallaabadan uu qaaday Madaxweyne Deni ayaa ah mid ku dayasho leh taasoo aysan badanaa hogaamiyaasha maamul goboleedyada aan loogaga baran.